Digsiyada | February 2020
Farsamooyinka beeraha ee digirta sii kordhaysa ee dhulka u furan
Maalmahan waa ay adagtahay in la helo goob lagu beeray digirta aan korin. Qof kastaa wuu ogyahay dhadhanka iyo sifooyinka wanaagsan ee dhaqankan, taasina waa sababta ay dadka waaweyn iyo carruurta u jecel yihiin wax badan. Sidoo kale, sida hilibka lo'da, waxaa ku jira qadar badan oo borotiinka qudaar ah, taas oo ah mid aad u sahlan in lagu dheefsho. Digirta cagaaran, cagaarka cagaaran waxaa ka mid ah fiitamiin B, PP, C, carotene, fosfooraska, birta, iyo lizin.
Beeralayda Tansaaniya waxay leeyihiin awood weyn oo loogu talagalay dhoofinta digirta suuqyada Hindiya. Tani waxaa ku dhawaaqay Manoj Kumar Bharti, Safiir aan caadi aheyn oo ka mid ah Jamhuuriyadda India ee Ukraine, intii lagu guda jiray shirka "Agribusiness 2017: qalabka maaliyadeed, teknoolajiyada cusub, qiimeynta khatarta iyo maamulka," oo ka dhacaya Kiev maanta.
Dhexdhexaadinta celceliska waddanka kama faani karo joogitaanka meelo ballaadhan oo aad ka dhigi karto wax kastoo nafta jecel. Sidaa darteed, sariiro isku mid ah waa in loo isticmaalo beeritaanka dhowr dalag xilli ciyaareed. Dhamaadka May iyo bilawga Juun, meeyada ku filan waa in la sii daayaa ka dib marka la goosto dalagyada hore ee beergooyska, isla markaana hadda waxaa jira cillad: inay ka tagaan madhan ama isku dayaan inay koraan wax kale.
Dhowaan, digirta waxay noqdeen wax soo saarka sii kordhaya, maxaa yeelay waxay hodan ku tahay fitamiinada iyo macdanaha badan. Qiyaasta borotiinkan khudradda ah ayaa ka caafimaad badan hilibka digaaga. Waxyaabaha aan la qabin ee dalagga waxay ka dhigeysaa mid soo jiidasho leh beerashada beeraha iyo dacha labadaba. Digirta qudaarta: sharaxaad ka soo baxda beerta beerta Beeraha - warshad cawska ee qoyska legume.
Haricot waa mid ka mid ah dhirta legumes ugu weyn, kaas oo loo beeray kumanaan sano. Maanta, in ka badan 20 nooc oo digir ah ayaa loo isticmaalaa karinta, faa'idooyinka mid kasta oo ka mid ah jidhka bini-aadamku waa isku mid, iyo dhadhanka iyo muuqaalka dabiiciga ah way ka duwan yihiin. Digirta waa, ugu horreyntii, borotiinka, waa qayb muhiim ah oo lagama maarmaan u ah dheef-shiid kiimikaad iyo xoojinta nidaamka muruqyada.
Maanta, ma aha mid ka mid caado ah digirta can of for jiilaalka waxaa loo yaqaan: waxaa lagu duudduubay foomka saafi ah, ee jajab ee tufaax, foomka saladh, oo leh iyo iyada oo aan geed isbonji la. Siyaabahan hore loo jecel yahay iyo kuwa la yaqaan, waxaan ku talineynaa in mid kale lagu daro. Wax ku saabsan faa'iidooyinka biilka Qodobka la soo jeediyey ee digirta yaryar ee jilicsan xilliga jiilaalka waa fiicantahay sababtoo ah waxaad isticmaali kartaa bamamka dhamaystiran oo aan isku mid ahayn.
Sida loo qalajiyo digir cagaar ah guriga
Xiriirka hadda jira waa mid nasiib leh: xulashada alaabta, oo markaa suxuunta la karin karo, waa mid weyn. Si kastaba ha noqotee, ha luminin xiriirkooda iyo guriga caadiga ah ee laga sameeyey miro la goostay. Tani waxay sidoo kale khuseysaa carruurnimada, taas oo, haddii si habboon loo shaqeeyo, waxay noqon kartaa cunto karis cunto badan.
Digirta gaduudan: imisa kalooriye, waxa fiitamiinadu ku jiraan, waxa faa'iido leh, haweenka uurka leh
Digirta gaduudan - mid ka mid ah dhirta ugu da'da weyn, oo dalkooda loo arko inuu yahay Koonfurta Ameerika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogsoon yahay in dhirta la beeray ee qadiimka ah ee Rome iyo Masar. Waxaa intaa dheer, kala duwanaanshahan waxaa lagu soo koobay daabacaadaha Shiinaha taariikh ahaan 2800 BC. Digirta warshadani waxay leedahay sifooyin badan oo faa'iido leh waana cunto aan lagamamaarmaan aheyn.
Cagaarka cagaaran: Guryaha waxtarka leh iyo abuurista goobta
Waxaa jira noocyo badan oo dhirta. Laakiin ujeedooyinka caafimaadka iyo raashinka daawooyinka dhaqameed, dhirta cagaaran ayaa sida caadiga ah loo isticmaalaa, iyada oo ayadoo lagu saleynayo daawooyinka iyo daaweynta guryaha loo yaqaan 'homeopathic preparations'. Noocyada isticmaalka iyo beerista dhirta ayaa tixgelin doona maqaalkan. Cinwaanka Botanical Tani dhirta waxaa si fiican loo yaqaan dhir caleen, iyo magaca botanical ee Latin waa Trifolium praténse.
Sidee ugu kicisaa soybeerka guriga iyo sida ay faa'iido u leedahay
Taageerayaasha cuntada cunta caafimaad leh badi waxay u muuqdaan inay bedelaan cuntada xayawaanka leh khudradda. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdan, dad badan ayaa la kulma dhibaatada magdhawga borotiinka iyo walxaha kale ee faa'iido leh ee jirka. Ilaa hadda, waxaa jira wax badan oo ka mid ah badeecooyinka aasaasiga ah ee dhirta, kuwaas oo qayb ahaan beddeli kara borotiinka xayawaanka ee kuwa aan u isticmaalin sabab kasta.
Isticmaalka qulqulka darajooyinka
Xaqiiqada ah in darajada cagaaran ee loo yaqaan 'crane' iyo kow iyo toban magacyo kale waxay muujinaysaa dabeecadda aan kala sooca lahayn ee cowskan, xiisaha uu u qabo iyo ixtiraamka sifooyinka kala duwan ee qiimaha leh. Dhab ahaantii, geedka oo gebi ahaanba, sida ay yiraahdaan, laga bilaabo xuduudaha ilaa xididada, ayaa awood u leh in ay dadka ka faa'iideystaan, maaha inay kaqeybqaataan kooxahooda.
Digirta waa marti naadi ah laakiin marti aad u muhiim ah miiska. Biyo la kariyey, qasacadaysan, qasacadaysan. Ahaanshaha ilaha waxyaallaha badan ee faa'iido leh, waxay noqoneysaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee cuntada. Ka fikir sida loo diyaariyo digirta jiilaalka dhowr siyaabood. Faa'iidooyinka digirta Qayb gaar ah ee fiitamiinada iyo walxaha waxay muujineysaa baahida loo qabo joogitaanka dhadhanka cuntada.
Senna Alexandria, ama warqad Alexandria: sharaxaadda iyo sifooyinka dhirta
Xaashida Alexandria ayaa sidoo kale loo yaqaanaa magacyada Cassia Afrika, Holm Cassia, Senna Masriga ah. Warshad waxaa loo isticmaalaa daawooyinka dadweynaha iyo daawooyinka dhaqameed, sidaa darteed waddamo qaar ayaa si gaar ah ugu hawlan sidii ay u soo saari lahaayeen alaabta ceeriin ee daawada ah. Tilmaamaha Botanical Waxaannu haynaa xayndaab horteena, oo ka tirsan qoyska legume.
Guga Guga ama sachevichik - warshad caddaalad caadi ah, wuxuu leeyahay hanti gaar ah. Marka la isticmaalo qalad, darajo wuxuu noqonayaa sun, laakiin habka macquulka ah ee diyaarinta iyo isticmaalka sirinjiga, waxay u noqoneysaa daroogo kaasoo kaa badbaadin kara dhibaatooyinka badan. Aynu ka hadalno waxyaabaha gaarka ah ee dhirta iyo cuntooyinkeeda.
Karinta kariska casaanka: cuntooyinka, hababka wax loo kariyo
Dhammaan nafaqooyinka jirka ee lagama maarmaanka ah ee jirka - borotiinka khudradda cagaaran, dufanka aan lahayn kolesteroolka iyo dhismaha vitamin-taajir ah oo badan - waxaa lagu soo ururiyaa digirta gaduudan. Xaqiiqdii, digirta kali ah waxay beddeli kartaa alaab kale oo badan. Aan wax dheeraad ah ka ogaano saameynta ku saabsan jirka ee digirta cas iyo sida loo diyaarin karo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Digsiyada 2020